Obi ụtọ na Halloween! -News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Obi ụtọ na Halloween!
Halloween bụ ụbịa ezumike ndị America na-eme kwa afọ. Ọ pụtara "mgbede dị nsọ," ọ na-abịa kwa Ọktọba 31, mgbede tupu ụbọchị ndị nsọ niile. Agbanyeghị, ọ bụghị ezumike ụka n'ezie, ọ bụ ezumike ụmụaka bụ ọkachasị.
N'oge mgbụsị akwụkwọ ọ bụla, mgbe akwụkwọ nri dị njikere iri nri, ụmụaka na-ewere nnukwu ugu oroma. Mgbe ahụ ha na-egbutu ihu na ugu ma tinye kandụl na-enwu ọkụ n'ime. Ọ dị ka ọ dị onye na-ele anya na ugu! A na-akpọ ọkụ ndị a jack-o'-lanterns, nke pụtara "Jack nke lantern".
Childrenmụaka ahụ na-etinyekwa ihe nkpuchi dị iche iche na uwe ndị na-eyi egwu na Halloween ọ bụla. Childrenfọdụ ụmụaka na-ete ihu ha ka ha bụ anụ ọjọọ. Ha na-ebuzi igbe ma ọ bụ akpa n’ụlọ n’ụlọ. Oge ọ bụla ha bịara n'ụlọ ọhụrụ,
ha na-ekwu, "Atọ ma ọ bụ na-emeso! Ego ma ọ bụ rie! ” Ndị toworo eto na-etinye ego ma ọ bụ swiit n’ime akpa ha.
Ọ bụghị naanị ụmụaka, mana ọtụtụ ndị toro eto na-ahụkwa emume Halloween na Halloween n'anya n'ihi na ụbọchị a, ha nwere ike gbanwee onwe ha dị ka ndị mmadụ ma ọ bụ mmụọ dị ka echiche ha ga-eduga ha. Nke a na-ewetara ha afọ ojuju nke ịbụ nwata.
Previous: Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ nke Alice!
Ọzọ: Ogige Mba - Ugwu XueDou